Tag: magento »Bogga 6 ee 8» Martech Zone
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Stitch Labs waxay bixisaa amar midaysan iyo maareynta alaabada kanaalka e-commerce oo dhan. Iska ilaali inaad gacanta ku geliso tirada alaabada waraaqaha, helitaanka qaansheegta, ama raadinta macluumaadka xiriirka. Tolmada waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku iibiso dhowr wadiiqooyin iib ah iyo xakameyn alaabeed oo laga helo hal meel Tilmaamaha Mowjadaha Ilaha Iibsiga Badan - Xakamee wax kasta oo ka soo dalbanaya lacag bixinta illaa rarka hal nidaam keliya. Maareynta Alaabada - dayactir tirooyin sax ah oo hubi in amarrada si sax ah loogu shaqeynayo. Dalbashada Raadinta - automate
Muujiye Websaydh Visual: Kordhi Iibka iyo Beddelka
Khamiista, Noofembar 14, 2013 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Visual Website Optimizer waa aaladda tijaabada A / B oo u oggolaaneysa xirfadleyda suuqgeynta inay abuuraan noocyo kala duwan oo bogaggooda internetka ah iyo bogagga degista iyagoo isticmaalaya tifaftiraha barta-iyo-guji ka dibna fiiri nooca ay soo saareyso heerka ugu sarreeya ama iibka. Visual Website Optimizer sidoo kale waa barnaamij tijaabin noocyo kaladuwan oo jilicsan (habka dhabta ah ee xaqiiqada) waxayna leedahay tiro qalab dheeri ah sida bartilmaameedka akhlaaqda, khariidadaha kuleylka, baaritaanka isticmaalka, iwm Imtixaanka A / B - Muuqaal ahaan u samee noocyo kala duwan oo shabakadaada ah
dotMailer EasyEditor: Jiid iyo Diidmada Editing Email
Isniin, November 4, 2013 Isniin, November 4, 2013 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Waxyaabo yar ayaa ka jahwareer badan qaabeynta cinwaanka emaylka HTML ama la shaqeynta dhisme saddexaad oo qaab-dhismeed ah. Qiyaas inaad awood u leedahay qaabeynta, naqshadeynta, dib u qaabeynta, iyo qaabeynta astaamaha emaylka ee adiga kuu gaarka ah… oo aan lahayn koodh HTML ama xirfadaha qaabeynta webka. Tani waa dhab ahaan waxa dotMailer uu ku abuuray EasyEditor-kooda. Astaamaha dotMailer's EasyEditor: Si dhakhso leh u soo dhoofso sawiradaada oo abuur maktabad - Isu diyaari dhammaan sawirada ololaha hal meel. Tijaabi farriinta ololaha
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Xulashada aaladda ganacsiga waxay ku tiirsan tahay doorsoomayaal badan. Tirada alaabada aad iibineyso, u habeynta alaabadaas la heli karo, shuruudaha isku dhafka, iyo ilaha loogu talagalay kor u qaadista iyo hagaajinta barmaamijka dhamaantood door ayey ka ciyaarayaan. Magento wuxuu ku qarxay maaddaama meheradda ecommerce ee xulashada sababtoo ah dabacsanaanta loogu talagalay u-dejinta iyo dhagaystayaasha badan ee isticmaalayaasha soosaaraya xalalka iyo taageeraya. Waxaan leenahay lamaane Magento Platinum ah oo aan shaqeyno
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Taageerayaashayda moobiillada waxay bixiyaan barnaamijyo mobilada la awoodi karo iyo websaydhyo moobil ah oo loogu talogalay shakhsiga, aan macaash doonka ahayn iyo bey'adda ganacsiga yar yar iyada oo la adeegsanayo warshadayntooda hoggaamiyaha barnaamij sameeyaha ah ee Do-It-Yourself (DIY) In ka badan 40 astaamood oo hodan ah oo loogu talagalay ka faa'iideysiga moobiilka, goobta iyo warbaahinta bulshada, waxay noqon karaan barnaamijka ugu qiimaha jaban uguna awoodda badan suuqa. Codsiga waa mid fudud, oo siinaya saaxir talaabo-tallaabo ah inuu kugu jiito adoo dejinaya barnaamijkaaga moobiilka. Tallaabada 1: Xullo kanaga
V Hore 1 ... 5 6 7 8 Next →